Sucuudi Carabiya Oo Soo Saaray Xeerar Cusub Oo Xoriyado Siinaya Haweenka – HCTV
Ahmed Cige 0	August 3, 2019 11:44 am
Riyadh, (HCTV) – Dalka Sucuudiga ayaa haweenka dalkaasi u ogolaaday inay u dhoofaan dibedda iyaga oo aan Muxrim wadan ama oggolaansho ka helin qof Lab ah oo ilaaliya.
Sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Sacuudiga oo uu daabacay Saudi GazetteGazette, Wasaaradda Shaqada iyo Horumarinta Bulshada ee Sacuudi Carabiya waxay qaadatay go’aan ah inay ula dhaqanto ragga iyo haweenka shaqaalaha ah ee dalka Sucuudiga si isku mid ah.
Ragga iyo dumarka labadaba hadda waxaa loo qaddarin doonaa inay yihiin shaqaale / dad u shaqeeya loo-shaqeeye oo hoos imanaya maamulkiisa ama kormeerkeeda dib-u-eegis mushaharka.
Wax ka bedelkan gaarka ah ee qawaaniinta shaqaalaha uma oggolaanayo loo shaqeeyayaasha iyo hay’adaha inay ku kala saaraan shaqaalaha iyadoo ku saleysan da’dooda, naafonimadooda iyo dheddignimadooda. Sharcigani wuxuu sidoo kale kordhin doonaa shaqaalaysiinta dadka shaqooyinka iyo xayeysiinta jagooyinka banaan ee shaqada.
Marka laga soo tago arrintan mas’uuliyiinta Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale baabiiyay xukunkii da’da hawlgabka- 60 sano ragga iyo 55 sano ee dumarka. Hay’addu waxay u wakiishay in howlgabnimada shaqaaluhu ay ku xidhnaan doonaan shuruudaha xeerarka iyo caymiska bulshada.
Xeerarka ayaa sidoo kale ka mamnuucaya loo shaqeeyayaasha inay joojiyaan adeegyada haweenka dhallinta ah ama ay soo saaraan ogeysiiska shaqo ka eryida shaqooyinka, inta ay ku jiraan fasaxa umusha. Sidoo kale lama siin karo nooc kasta oo waraaqo digniin ah ama lama joojin karo haddii ay bukoodaan cudur dartiis oo uur ku jira ama walaac caafimaad wakhtiga dhalmada. Si kastaba ha noqotee xanuunkooda waa in lagu caddeeyaa, iyada oo loo marayo warbixin caafimaad oo asluub ​​leh iyo maqnaanshaha shaqaalaha ee shaqada waa in aanu ka badnaan 180 maalmood – ha ahaado mid joogto ah ama kala go ‘.
Dalka Sacuudi Carabiya ayaa hadda u oggolaan doonta haweenka inay u safraan dibedda iyaga oo aan oggolaansho ka haysan ilaaliye lab ah, dowladda ayaa sheegtay Khamiista (1-da Agoosto).
“Baasaboor ayaa la siin doonaa muwaadin kasta oo Sucuudiga ah oo soo gudbiya codsi,” ayaa lagu yidhi xukun dowladeed oo lagu daabacay Saudi gazette.
Sharcigan ayaa si wax ku ool ah u oggolaanaya haweenka da’doodu ka weyn tahay 21 sano inay helaan baasabooro oo waddanka uga baxaan iyaga oo aan haysan rukhsaddooda ilaaliyaha, sidaa waxaa sheegay wargayska dawladda ka soo baxa ee Okaz iyo warbaahinta kale ee maxalliga ah, iyagoo soo xiganaya masuuliyiinta sare.